आकाशको ब्रतबन्धमा झोला भरि गिफ्ट बोकेर खुशी हुँदै पुगिन पुजा – Kavrepati
Home / मनोरंजन / आकाशको ब्रतबन्धमा झोला भरि गिफ्ट बोकेर खुशी हुँदै पुगिन पुजा
admin4weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 7,277 Views
आकाशको ब्रतबन्धमा झोला भरि गिफ्ट बोकेर खुशी हुँदै पुगिन पुजा, आकाशलाई देखेपछि भक्कानिएर रोइन् पूजा, हेर्नुहोस् भिडियो
आँफुभन्दा १० वर्ष कान्छा ह्याण्डसमसँग विबाह गरिन् चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठले, विबाहमा लेहेंगा मात्रै किनिन् १५ लाखको, सुटुक्क गरिएको विबाहको एउटा क्लिप बन्यो भाइरल, हेर्नुहोस् उक्त भिडियो
सात महिना यताकै न्यून रकमको कारोबार,किन घट्यो कारोबार ? यसले के सङ्केत गर्छ ? बिहीबार सात महिना यताकै न्यून कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजारमा बिहीबार सात महिना यताकै न्यून कारोबार भएको हो। बुधवार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्षमा तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरका शेयर किनबेच भए।
४९ हजार ८३५ कारोबारमा ७३ लाख २१ हजार कित्ता शेयर किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको हो। जुन सात महिना यताकै न्यून हो। यस अघि गत २०७७ चैत १४ मा तीन अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस यता कुनै दिन पनि उक्त रकम भन्दा कमको कारोबार भएको थिएन।
दोस्रो बजारमा नेप्से सूचक लगातार घट्दै गएपछि कारोबार रकम समेत घट्दै गएको हो। बुधवार मात्रै शेयर बजार मापक सूचक ३२.५१ अंकले घटेको छ। गएको एक महिनादेखि सूचकमा दबाव पर्दै आएको छ। गत सातादेखि सूचकमा तीव्र दबाव परिरहेको छ। शेयर सूचक घट्दै जाँदा कारोबार रकममा समेत प्रभाव परेको शेयर विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। कारोबार रकम घट्दै जानुलाई प्राविधिक रुपमा राम्रो मान्नु पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
“सूचक घट्दा कारोबार रकम घट्नु प्राविधिक रुपमा राम्रो मान्नु पर्छ। किनकि बजारमा सस्तो मूल्यमा किन्न बसेका कारोबारीलाई बिक्रीकर्ताले उनीहरूले मागेकै मूल्यमा शेयर दिन मानेका छैनन् भन्ने जनाउ दिन्छ। जसले आगामी दिनमा खरिद कर्ताको मूल्य भन्दा बिक्रीकर्ताको मूल्यलाई स्वीकार्न घटेको कारोबारले बाध्य पार्दै लगेको रुपमा यसलाई हेर्नु पर्छ” नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने।
बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले असोज ११ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा ल्याएको आईपीओमा बिहीबारसम्ममा २१ लाख बढी आवेदकले आवेदन दिएका छन्। बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलका अनुसार बिहीबार बेलुका ५ बजेसम्ममा कम्पनीको आइपीओमा २१ लाख ११ हजार ८१९ जना आवेदकले २ करोड ६५ लाख ३१ हजार ४० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन्।
पछिल्लाे तथ्यांकअनुसार कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिने २० लाख बढी आवेदक अर्थात ९६.४७ प्रतिशत आवेदकले शेयर नपाउने भएका छन्। यसमा केहि आवेदन रद्द हुन सक्नेछ भने बैंकमार्फत आवेदन गर्नेको अझै आवेदन थप हुन सक्नेछ।
कम्पनीले ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो। निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १६ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ७ लाख ४४ हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ।
Previous डिभोर्सपछि श्रीमतीलाई अंश नदिन आफ्नो ९ करोडको घर आफैं ज’लाए
Next मिलन नेवार भक्कानिँदै भन्छिन्– डिभोर्सपछि पनि मेरो करियर सिध्याउन खोजिँदैछ (भिडियो)